Yandisa Iinzame zakho zeNtengiso zika-2022 ngoLawulo lweMvume | Martech Zone
Unyaka ka-2021 ubungalindelekanga nje ngo-2020, njengoko uninzi lwemiba emitsha icela umngeni kubathengisi. Abathengisi kuya kufuneka bahlale bekhulile kwaye besabela kwimingeni emidala kunye nemitsha ngelixa bezama ukwenza okungakumbi ngokuncinci.
I-COVID-19 itshintshe ngokungenakuguquleka indlela abantu abafumanisa ngayo kwaye bethenga - ngoku yongeza amandla okudibanisa okwahluka kwe-Omicron, ukuphazamiseka kwekhonkco lokubonelela kunye nokuguquguquka kweemvakalelo zabathengi kwipuzzle esele inzima. Abathengisi abajonge ukubamba imfuno ye-pent-up bahlengahlengisa ngokutshintsha ixesha lemikhankaso yabo yokuthengisa, ukunciphisa uhlahlo lwabiwo-mali lwentengiso ngenxa yemingeni yokubonelela, besuka kude kwimveliso ethile yokuyila kunye nokwamkela ithoni "engathathi hlangothi kodwa enethemba".
Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba abathengisi bacinge ngokutyhala ukuthumela kwi-imeyile yabo elandelayo okanye imikhankaso yokubhaliweyo, kufuneka baqinisekise ukuba balandela ezona ndlela zilungileyo zonxibelelwano lwabathengi kunye nemithetho yolawulo lwemvume.
Yintoni Ulawulo Lwemvume?
Ulawulo lwemvume yindlela esetyenziswayo ukwenza ngokuzenzekelayo ukuqokelelwa kwemvume yakho, ukwenza kube lula ukwakha ukuthembana, ukukhuthaza abathengi ukuba bangene kwaye bagcine ukuthobela imimiselo yemvume yabo.
Kutheni le nto uLawulo lweMvume lubalulekile?
A iqonga lolawulo lwemvume (CMP) sisixhobo esiqinisekisa ukuthotyelwa kwenkampani kunye nemigaqo yemvume yonxibelelwano efanelekileyo, efana ne GDPR kwaye TCPA. I-CMP sisixhobo senkampani okanye abapapashi abangasisebenzisa ukuqokelela imvume yabathengi. Ikwanceda nokulawula idatha kunye nokwabelana ngayo ngetekisi kunye nababoneleli ngenkonzo ye-imeyile. Kwiwebhusayithi enamawaka eendwendwe zemihla ngemihla okanye inkampani ethumela amashumi amawaka ee-imeyile okanye imiyalezo ebhaliweyo ngenyanga, usebenzisa i-CMP yenza lula ukuqokelela imvume ngokwenza inkqubo ngokuzenzekelayo. Oko kuyenza ibe yindlela esebenzayo nengabizi kakhulu yokuhlala uthobela kwaye inceda ukugcina imizila yonxibelelwano ivulekile.
Kubaluleke kakhulu ukuba abathengisi basebenze kunye namaqabane athembekileyo asebenza kwizisombululo zolawulo lwemvume, ngakumbi ukwakha kunye nokunyusa iqonga elithathela ingqalelo umthetho wazo zonke iindawo ezifanelekileyo, kubandakanya i-United States, iCanada, i-EU kunye nokunye. Ukuba nenkqubo enjalo endaweni kunciphisa umngcipheko wokwaphulwa kwemithetho yedatha yalo naliphi na ilizwe okanye indawo apho inkampani yakho inethemba kunye nabathengi. Amaqonga aphambili anamhlanje akhiwe ngokuthotyelwa-ngoyilo, eqinisekisa ukuba njengoko imimiselo itshintsha kwaye ikhula, kunjalo ke ukuthotyelwa kwemvume yolawulo olufanelekileyo lophawu.
Ulawulo olululo lwemvume lukwabalulekile xa kujongwe ukuvela kude kusetyenziso lwedatha ye-cookie yomntu wesithathu kunye nokuqokelela idatha yomntu wokuqala ngqo kubathengi.
Ukuhamba kude kwiDatha yomntu wesithathu
Kubekho imfazwe ixesha elide ngoku malunga nelungelo lomntu kubumfihlo bedatha. Ngaphaya koko, kukho i-paradox yabucala/yomntu ekhoyo. Oku kubhekiselele kwinto yokuba abathengi bafuna ubumfihlo bedatha kunye nokwazi ukuba idatha yabo ikhuselekile. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, siphila kwihlabathi ledijithali kwaye uninzi lwabantu luziva luxinezelekile yiyo yonke imiyalezo ezayo kubo mihla le. Ke ngoko, bafuna ukuba imiyalezo ibe yeyomntu kwaye ifaneleke kwaye ilindele ukuba amashishini abonelele ngamava amnandi kubo.
Ngenxa yoko, kukho utshintsho olusisiseko kwindlela iinkampani eziqokelela kwaye zisebenzise idatha yomntu. Iinkampani kunye nabathengisi ngoku bagxile ekwamkeleni ukuqokelelwa kwedatha yomntu wokuqala. Olu hlobo lwedatha lulwazi umthengi abelana ngalo ngokukhululekileyo nangobom nophawu aluthembileyo. Inokubandakanya ulwazi lobuqu olufana nezinto ozikhethayo, ingxelo, ulwazi lweprofayile, izinto onomdla kuzo, imvume, kunye nenjongo yokuthenga.
Njengoko iinkampani zigcina ubume bokungafihli malunga nokuba kutheni ziqokelela olu hlobo lwedatha kwaye zibonelela abathengi ngexabiso ngembuyekezo yokwabelana ngedatha yabo, bafumana ukuthembela ngakumbi kubathengi babo. Oku kwandisa ukuzimisela kwabo ukwabelana ngedatha eninzi kunye nokungena ekufumaneni unxibelelwano olufanelekileyo oluvela kwi-brand.
Enye indlela iinkampani ezinyusa ngayo ukuthembela kubathengi kukugcina behlaziywa ngobonelelo kunye nohlaziyo lwe-inventri kwiimveliso abanomdla ekuzithengeni. Le ngxoxo yengxoxo elubala malunga nohlaziyo lokuthumela inceda ukulawula okulindelweyo ngokufanelekileyo ekuhanjisweni, okanye nokulibaziseka kokuthunyelwa.
Ukucwangcisela iMpumelelo yeNtengiso ka-2022
Ukugxila kwezi zicwangciso kubalulekile kungekuphela nje ekulawuleni umjikelo wokuthenga rhoqo, kodwa kunye nokucwangcisa imisebenzi yentengiso ye-2022 kunye nokwandiswa kwe-mar-tech. Ikota yesine ngokuqhelekileyo lixesha apho iimpawu zidibana kunye namaqela abo okuthengisa ukuqinisekisa ukuba unxibelelwano lusendleleni kwaye luchonge izicwangciso zonyaka ozayo ukuphucula amava omthengi ngokubanzi, ukwandisa ingeniso kunye nokugcina imizila yonxibelelwano ivulekile.
Ngokuthathela ingqalelo la manyathelo, wena kunye nebhrendi yakho niqinisekile ukuba niya kuba linyathelo eliphambi kokhuphiswano ekuqaleni kuka-2022!
Ngolwazi olongezelelweyo kwi-PossibleNOW's iqonga lolawulo lwemvume:
Cela i-PossibleNOW iDemo
tags: cmpulawulo lwemvumeiqonga lolawulo lwemvumeisoftware yolawulo lwemvumeimfihlo yabathengicookiescookies zokuqalakunokwenzeka ngokumiselocookies zero-party